Horudhac: Athletic Bilbao vs Real Madrid… (Los Blancos oo galabta hoggaanka horyaalka La Liga 7 dhibcood kaga qaban karta Barca) – Gool FM
(Bilbao) 05 Luulyo 2020. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa indhaha ku haysa inay todobo dhibcood oo nadiif ah hoggaanka horyaalka La Liga ku qabto, marka ay galabta oo Axad ah u safrayaan Naadiga Athletic Bilbao.
Los Blancos ayaa haatan afar dhibcood oo saafi ah ka sarreysa kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Barcelona, halka Athletic ay fadhiso kaalinta siddeedaad, waxaana ay shan dhibcood ka dambeeyaan naadiga Getafe oo ku jirta kaalimaha looga qeyb galo Europa League.
Saacadda ay bilaabaneyso dheesha: 3:00 Galabnimo xilliga geeska Afrika.
Garoonka: San Mames Barria
Garsooraha: Jose Luis Gonzalez (Spain)
Inigo Cordoba ayaa kula dagaallami doona Iker Muniain inuu markale ku soo bilowdo safka hore ee kooxda Athletic Club, iyadoo la filayo in Oihan Sancet uu helo fursad kale maanta.
Unai Nunez ayaa laga yaabaa inuu ku wareego wadnaha daafaca ee kooxda martida loo yahay, taasoo fursad siineysa Yeray.
Mikel Vesga ayaa sidoo kale kala wareegi kara Unai Lopez khadka dhexe ee kooxda Gaizka Garitano.
Eden Hazard ayaan taam u ahayn inuu kulankan ka soo muuqdo, isagoo aan ku soo birin liiska xiddigaha Real Madrid uga qeyb galaya kulankan, waxaana laga filayaa in Karim Benzema xiddigo kale lagu lammaaniyo kuwaasoo ka caawinaya dhinaca weerarka.
Raphael Varane ayaa sidoo kale dhaawac ku seegaya kulankan, laakiin waxaa la filayaa booska uu ka maqan yahay daafacan Faransiiska ah inuu buuxiyo oo uu ku bilowdo Eder Militao.
Federico Valverde ayaa lagu soo bilaabi karaa kulankan, iyadoo Zinedine Zidane uu fursad ka siin karo khadka dhexe.
>- Kooxda Athletic Bilbao ayaan la garaacin 27 kulan oo ka mid ah 30-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku ciyaartay horyaalka La Liga.
>- Real Madrid ayaa guuleysatay lixdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka La Liga.
>- Kooxda Real Madrid ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka La Liga.
>- Los Blancos ayaan laga adkaanin sagaalkeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahday Athletic Bilbao tartammada oo dhan.